Man City oo xaqiijisay in Raheem Sterling uu seegi doono kulanka West Ham – Gool FM
Man City oo xaqiijisay in Raheem Sterling uu seegi doono kulanka West Ham
(Manchester) 07 Feb 2020. Weeraryahanka kooxda Manchester City ee Raheem Sterling ayaa seegi doona kulanka Axada ee horyaalka Premier League ay kula ciyaari doonaan naadiga West Ham, sababa la xiriira dhaawac dhanka muruqa ah.
25 jirkan reer England ayaa dhaawac looga saaray kulankii kooxdiisu ay guuldarro 2-0 ah ka soo gaartay Tottenham Axadii hore.
Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Man City, oo 22 dhibcood ka dambeysa hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Liverpool, ayaa xaqiijiyay in baaritaano lagu sameeyay Raheem Sterling ay muujiyeen in dhaawac uu ka soo gaaray muruqa lugta bidix.
Si kastaba ha noqotee, Raheem Sterling ayaa ka soo muuqday 23 ka mid ah 25 kulan oo ay Manchester City ciyaartay xilli ciyaareedkan.
Pep Guardiola oo ka hadlay wararka xanta ah ee la xiriirinaya Lionel Messi & dhaawaca Raheem Sterling